I-Watermill appt kufutshane nezixeko - I-Airbnb
I-Watermill appt kufutshane nezixeko
Ifama sinombuki zindwendwe onguLieve
I-appartment ekhululekile (max 5pp) kwi-watermill kwidolophana encinci ejikelezwe yindalo ephezulu, ekufuphi neLeipzig (iyure eyi-1), iDresden (iyure eyi-1), iBerlin (iiyure ezi-2,5) kunye ne-Prague (iiyure ezi-2). Kufuphi kakhulu kwidolophu edumileyo Weimar- 85euro for 2 pp (min 2 nights). Iibhayisekile ziyafumaneka ukuze uqhube ukuya echibini elikufutshane (indawo yokuqubha yokuzonwabisa).
Igumbi libanzi kwaye limnandi kwaye linezinto ezininzi zokuqala, itafile enkulu enezitulo ezitofotofo zokutya kunye nokuzonwabisa. Ikona yeTV enesofa ukuze ilingane abantu aba-5. Ikhitshi elitsha kraca elinazo zonke izixhobo eziyimfuneko. Indawo yokulala ihluke kwaye enye i-stair up kunye neendawo zokulala ezi-5: enye ibhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezi-3 kumntu omnye. Igumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nendlu yangasese.
Ifakwe kwilali encinci eluhlaza, indalo ephezulu ejikeleze kwaye ecaleni kwenqaba yenkulungwane ye-10. Ubuninzi beeyure ezi-2 zokuqhuba kukuzisa kwiidolophu ezi-4 eziphambili: iLeipzig, iDresden, iBerlin nePrague. Indawo edumileyo iWeimar ikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Lieve
Umnini (Live) uyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo. Ngeentsuku zokusebenza emva kwe-18u.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Windischleuba